Farmaajo oo diiday xalka qodobadii la isku hayay | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo diiday xalka qodobadii la isku hayay
Shirkii lagu dhex dhexdhexaadinayay Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Farmaajo, ayaa xalay xilli danbe lagu kala dareeray, kadib markii Farmaajo ka hor yimid in xal laga qaaro qodobbadii a isku qabtay.
MUQDISHO, Soomaaliya – Wada-hadalladii u dhaxeeyay Ra’iisul Wasaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo Madaxweynihii Muddadu ka dhamatay Maxamed Cabdullahi Farmaajo, ayaa ugu danbayn burburay, kadib markii Kooxda Farmaajo ka hor yimaadeen in xal laga gaaro labadii qodob ee ugu muhiimsanaa wada-xaajoodka oo dhan.
Sida ay Keydmedia Online ogaatay, Farmaajo, wuxuu diiday in kiiska Ikraan Tahliil Faarax, lagu sameeyo baaritaan madax-bannaan, loona daayo laamaha garsoorka, halka uu sidoo kale ka hor yimid magacaabiddii Sarreeye Guud, Bashiir Goobe, ee Ra’iisul Wasaare Roobe u magacabay Agaasimaha Hay’adda Nabad-sugidda iyo sir-doonka Qaranka.
Labadaas qodob ayaa gundhig u ahaa shirka oo dhan, waxaana wajigabax xooggan dhanka Farmaajo iyo Fahad kala kulmay Madaxweynayasha Maamullada Galmudug iyo Koofur Galbeed, Axmed Qoorqoor iyo Cabdicasiis Lafatagareen, oo isku xil saaray in xal buuxa loo helo khilaafka labada xaafiis.
Ra’iisul Wasaare Rooble, oo heysta taageerada shacabka iyo siyaasiyiinta, isla-markaana ay kalsooni buuxda siiyeen qoyska Ikraan, ayaa ku adkeystay dhankiisa in uusan wax gorgortan ah ka gali doonin arrimaga ku gadaman kiiska gabadha maqan, iyo waraaqihii dhawaan ka soo baxay Xaafiiskiisa.
Sida ay KON, hore u baahisay, Farmaajo geed dheer iyo mid gaaban ayuu u kore doonaa si uu eedeysanayaasha uu hoggaaminayo Fahad Yaasiin uga badbaadiyo gacmaha sharciga, wuxuuna qarash kasta u huri doonaa in la daboolo kiiska Ikraan Tahliil, oo tan iyo 26-kii Juun ku maqan gacanta NISA.
Farmaajo, ayaa hore masuul uga ahaa burburka, wadahadallo masiiri ah, waxaana la filayaa inuu adeegsado baarlamaankii hore, si ay u soo saaraan go’aanno sharcidarro ah taas oo abuuri karta in mar kale Muqdisho marti galiso isku dhac ciidan.